Inona avy ireo karazana Internet (Maizina, lalina, ety ivelany & mazava)? | Martech Zone
Tsy miresaka momba ny filaminana an-tserasera na ny Dark Web. Na dia niasa tsara aza ny orinasa tamin'ny fiarovana ireo tambajotran'izy ireo anatiny, ny fiasana an-trano kosa dia nanokatra orinasa ho amin'ny fandrahonana fanampiny amin'ny fidirana an-tsokosoko sy fikafika.
20% amin'ireo orinasa no nilaza fa niatrika fanitsakitsahana fiarovana vokatry ny mpiasa lavitra.
Fiaretana ao an-trano: ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ny fiarovana ara-barotra
Tsy andraikitry ny CTO intsony ny fiarovana ny cyber. Satria ny fifampitokisana no vola sarobidy indrindra amin'ny tranonkala, zava-dehibe ny fananganana ny fahatokisan'izy ireo ny loza mety hitranga sy ny fomba fitantanana ny olan'ny fifandraisana amin'ny besinimaro izay mety hanaraka ny fahalavoana. Ary koa, miaraka amin'ireo ekipa mpivarotra miasa lavitra amin'ny angon-drakitra mpanjifa sarobidy… nitombo tokoa ny fahafaha-manao fandikan-dalàna.
Ireo karazana Web Deep
Ny Internet dia voasokajy malalaka amin'ny faritra 3 mifototra amin'ny fahazoana ny fampahalalana hita ao:
Hamafana ny tranokala na ny habakabaka ambonin'ny - ny faritra amin'ny Internet izay fantatry ny ankamaroantsika, ity dia pejy azo jerena ampahibemaso izay voatanisa amin'ny motera fikarohana.
Izay rehetra hitantsika amin'ny motera fikarohana dia tsy misy afa-tsy 4 ka hatramin'ny 10% amin'ny tranonkala.
Lalina tranonkala - ny Deep Web dia faritra amin'ny Internet izay takona amin'ny besinimaro fa tsy natao ho an'ny asa ratsy. Ny mailakao, ohatra, dia ny Deep Web (tsy arahin'ireo motera fikarohana fa azo idirana tanteraka). Ny sehatra marketing SaaS, ohatra, dia natsangana tao anaty tranonkala lalina. Mitaky fanamarinana izy ireo raha te hahazo ireo angona ao anatiny. 96% amin'ny Internet no Deep Web.
Dark Web - ao anatin'ny Lalina tranonkala dia faritra amin'ny Internet izay miafina tsy azo antoka hijerena azy. Izy io dia faritra iray amin'ny tranonkala izay misy fitsikerana ny anarana tsy fantatra anarana ka manjaka kokoa ny asan-jiolahy. Ireo data tsy voavolavola, asa ratsy tsy ara-dalàna, ary media tsy ara-dalàna dia hita, vidiana, ary amidy eto. Efa nisy ny tatitra momba ny Vaksinin'ny COVID-19 amidy ao amin'ny Dark Web!
Nanazava ny tranonkala maizina
Zava-dehibe ny milaza fa ny tranonkala mainty dia tsy natao ho an'ny asa ratsy fotsiny… fa manome hery ny olona amin'ny alàlan'ny anarana tsy fantatra anarana koa izy io. Any amin'ireo firenena mamepetra ny fahalalahana miteny na manara-maso akaiky ny fifandraisan'ny olom-pireneny, ny Web Dark dia mety ho vavahady tsy voasivana ary mahita vaovao tsy naely na nampiasain'ny governemanta. Ny Facebook, ohatra, dia azo alaina ao amin'ny Dark Web.
Ampahany kely amin'ireo mpampiasa manerantany (∼6.7%) no mety mampiasa ny Web Dark ho amin'ny tanjona ratsy amin'ny andro antonony.
Source: Ny mety ho voka-dratsy ateraky ny tambajotran'ny tambajotra anarana miafina Tor any amin'ny firenena afaka
Any amin'ny firenena afaka miteny malalaka, tsy toerana tokony hisy izany akory. Tao anatin'ny telopolo taona niasako tamin'ny Internet dia tsy nila nitsidika ny tranonkala mainty mihitsy aho ary mety tsy hanao izany mihitsy.
Ahoana ny fomba ahatongavan'ireo mpampiasa ny tranonkala maizina
Ny fidirana amin'ny Internet matetika dia amin'ny alàlan'ny a Tor network. Fohy ny Tor Ny router amin'ny tongolo. Fikambanana tsy mitady tombom-barotra Tor izay mikaroka sy mamolavola fitaovana manokana momba ny fiainana manokana an-tserasera. Ny mpitsangatsangana Tor dia manaloka ny asanao an-tserasera ary mety mila asaina mihitsy aza ianao hiditra amin'ny domains .onion manokana ao anaty tranokala maizina.
Izany dia tanterahina amin'ny alàlan'ny famonosana ny fifandraisana rehetra amin'ny sosona enkripsi maromaro izay ampitaina amin'ny isa maromaro. Ny serasera Tor dia manomboka amin'ny kisendrasendra mankany amin'ny iray amin'ireo teboka fidirana ampahibemaso, mamoaka ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny fampitana afovoany voafantina tampoka, ary amin'ny farany dia mamaha ny fangatahanao sy ny valinao amin'ny alàlan'ny teboka fivoahana farany.
Misy tranokala aza mitady ny loharanom-pahalalana na dia ny Dark Web aza. Ny sasany aza azo idirana amin'ny alàlan'ny fizarana fizahana mahazatra… ny sasany dia lahatahiry fanao wiki izay natambatry ny mpampiasa. Ny sasany mampiasa AI mba hamantarana sy hanilihana ny vaovao tsy ara-dalàna… ny hafa kosa misokatra amin'ny fanondroana ny zava-drehetra.
Fanaraha-maso ny tranonkala maizina
Ny ankamaroan'ny angon-drakitra heloka bevava izay novidina sy lafo tao amin'ny tranonkala mainty dia ireo tahiry voabanga, rongony, fitaovam-piadiana ary entana sandoka. Ireo mpampiasa dia mampiasa crytpocurrency mba hanaovana ny varotra vola rehetra ho voahidy sy tsy hitonona anarana.
Tsy te-hahita ny angon-drakitra vakiny ao amin'ny tranonkala mainty ireo marika… nofy ratsy PR izany. Misy fanaraha-maso tranonkala maizina vahaolana any ho an'ny marika ary azo inoana fa efa narahin'ny fikambanana hafa ianao raha te hahita ny mombamomba anao.
Raha ny marina, rehefa nampiasa ny iPhone aho hiditra amina tranonkala iray ary hitahiry ny teny miafiko amin'ny Keychain, Apple Nampitandrina ahy rehefa hita tao amin'ny banga iray ny iray amin'ny teny miafiko… ary manolo-kevitra ny hanovana azy io.
Ataovy vaovao farany ny rindrambaiko rehetra fa tsy ny rindrambaiko anti-virus ihany.
Mampiasà tenimiafina mahery maro - aza manana tenimiafina tokana amin'ny zava-drehetra. Sehatra fitantanana teny miafina toa Dashlane miasa tsara ho an'ity.
Mampiasà VPN - mety tsy ho voaro araka ny eritreretinao ny tambajotra tsy miankina amin'ny daholobe sy ny trano. Ampiasao VPN rindrambaiko hametraka fifandraisana azo antoka amin'ny tamba-jotra.
Zahao ny kaontim-piainanao rehetra ao amin'ny kaonty media sosialy ary alefaso ny fidirana an-tariby roa na singa marobe na aiza na aiza azonao atao.
Tsy manana kaonty fitsikerana na kely aza aho fa tsy mila mampiditra ny teny miafiko aloha ary avy eo mahazo passphrase faharoa mandefa hafatra amin'ny findaiko na mitraka amin'ny alàlan'ny rindrambaiko mpanamarina finday. Midika izany fa, na dia misy mpijirika aza mety maka ny anaranao sy ny tenimiafinao, dia tsy maintsy manana fidirana amin'ny findainao izy ireo mba hamerenana ny fehezanteny amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra na programa fanamarinana.
Mitadiava padlock na HTTPS ao amin'ny fikandrana fitetezanao - indrindra rehefa miantsena an-tserasera. Izany dia fampisehoana fa manana fifandraisana azo antoka sy voahodin-koditra eo anelanelan'ny tranokalanao sy ny toerana itodihanao ianao. Midika izany amin'ny ankapobeny fa tsy misy olona misintona ny fivezivezena amin'ny tambajotrao mahita ny fampahalalana izay andalovanao etsy sy eroa.
Aza manokatra na misintona fametahana avy amin'ireo adiresy mailaka tsy fantatra.
Aza tsindrio ny rohy misy ao anaty mailaka raha tsy fantatrao ny mpandefa azy.
Hamarino tsara fa mamela ny VPN sy ny firewall anao.
Manana fatra voafetra ao amin'ny carte de crédit anao amin'ny fifanakalozana an-tserasera.
Raha orinasa ianao ary efa nampandrenesina momba ny fanitsakitsahana angon-drakitra sy ny fampahalalana hita ao amin'ny Internet Dark, apetraho a Paikadin'ny fifandraisana amin'ny krizy PR ampandreneso avy hatrany ny mpanjifanao, ary ampio izy ireo hanalefaka ny loza mety hitranga amin'ny tena manokana.
Fampahalalana: mampiasa rohy afiliana ho an'ny serivisy ivelany ato amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: mpisolovava amin'ny cartwrightmazava tranonkalatranonkala maizinaweb deepny tenimiafinasecuritytranokala ambonin'ityny tambajotra tongoloTortambajotra torroa-antony fanamarinanaVPNrindrambaiko vpninona nyinona ny tranonkala mazavainona ny tranonkala maizinainona ny tranonkala lalinainona ny tranonkala eto an-tany
Febroary 10, 2021 amin'ny 11:51 PM
Dark Web dia tena mampidi-doza amin'ny Internet